नेकपाका वडा अध्यक्ष बलत्कारी हुन् की ज्यनमारा ? – Esewanews
Home / विविध / नेकपाका वडा अध्यक्ष बलत्कारी हुन् की ज्यनमारा ?
Shivaram Khadka विविध Leaveacomment 5760 Views
नमुना विकास गरेर जनताको सुख दुखमा साथ दिने बाचा सहित निर्वाचित एक वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधीले नै भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउने युवाहरुलाई मरणासन्न हुने गरी रामधुलाई गरेका छन् । कालिकोटा जिल्लाको राष्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष नरजंङ शाहीको निर्देशन तथा उनकै भाइ र छोराको नेतृत्वमा स्थानीय युवाहरु कुटिएका हुन् ।
वडाध्यक्ष शाहीको निर्देशनमा स्थानीय ६ जना युवा मरणासन्न हुने गरी पिटिएका हुन् । जसमा दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । गत साउन १८ गते राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै वडाध्यक्ष शाहीले ६ जनालाई कुटाएका हुन् । तीमध्ये कृष्ण शाही र प्रकाश शाही गम्भीर अवस्थामा अस्प्तालमा उपचाररत छन् ।
अन्य घाइतेहरुमा ललितबहाुर शाही, खगेन्द्र शाही, चिरञ्जीवी शाही र हिक्मत शाही रहेका छन् । कुटिनेमा चिरञ्जीवी, प्रकाश र कृष्ण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा निकटका हुन् । ललित, खगेन्द्र र हिक्मत नेपाली कांग्रेस निकटका हुन् ।
पीडितका तर्फबाट प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिँदा पनि उजुरी लिनलाई प्रहरीले मानेको छैन । नेकपा नेताले जाहेरी नलिन दबाब दिएको बुभिएको छ । प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको सन्दर्भमा बुझ्दा नेकपाभित्रको आन्तरिक मामिला भएकाले आफूहरुले आन्तरिक रुपमा मिलाउने भन्ने खवर आएकोले घटना दर्ता नगरिएको बताईएको छ ।
विगत लामो समयदेखि नगरभित्रको विकास र पारदर्शीताको आवाज उठाउँदै आएको भन्दै वडाध्यक्ष शाहीले ललितलाई मार्ने नै योजनाका साथ आक्रमण गरेको पिडितको दाबी छ । खानेपानी उपभोक्ता समिति गठनमा लापरबाही भएको र आफन्तको भर्ती केन्द्र बनाएपछि त्यसको विरोध गरेकाले त्यसकै प्रतिशोध स्वरुप ललितमाथि आक्रमण भएको एक पीडितकी आमाले बताइन् ।
घटना ललितमाथि नै गर्न खोजिएको भए पनि उनी स्वयं ब्ल्याक बेल्ट भएकाले उनलाई कम क्षति भएको छ यद्यपी उनको हात भाँचिएको छ । देउरा मालिकामा १८ गते दर्शन गर्न जाने क्रममा ललित लगायत युवाहरु पिटिएका थिए ।
पछिल्लो समय नेकपावाट निर्वाचित खाडाचक्र नगरपालिका र नरहरनाथ गाउपालिकाका दुई जना वडा अध्यक्षले स्थानीय युवतीलाई बलत्कार गर्दा समेत नेकपा नेतृत्व दोषिलाई कार्यबाहीको साटो जोगाउन लागे पछि नेकपाका वडा अध्यक्ष बलत्कारी हुन् की ज्यनमारा ? नेकपा नेताहरुको नियत माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको स्थानियवासी वताउछन् ।
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:२७
रुस र युक्रेनबीच आज पुन: वार्ता हुँदै
देशभरका २१ विमानस्थलमा उड्दैनन् जहाज
प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुन दसैं आज बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। घटस्थापनाको साइत ...